Mpanakanto niharan-doza :: Namoy ny mpandihiny teny Ankazobe ny tarika D’alvis • AoRaha
Mpanakanto niharan-doza Namoy ny mpandihiny teny Ankazobe ny tarika D’alvis
Lehilahy iray, 22 taona, mpandihin’ny tarika D’Alvis no namoy ny ainy, valo kosa no naratra ka isan’izany i D’Alvis, mpitantana ny tarika. Ireo no tatitra voaray vokatry ny lozam-pifamoivoizana nihatra tamin’ny tarika D’Alvis, omaly nanodidina ny tamin’ny iray ora maraina. Hihazo an’Antananarivo renivohitra tokony hanatanteraka seho takariva, tetsy amin’ny Suite 101 Antaninarenina izy ireo, omaly, no izao tra-doza teo amin’ny 25 kilometatra tsy hidirana an’Ankazobe izao.
« Fiara Mercedes Sprinter nanainga avy tany Marovoay hihazo an’ Antananarivo no nitondra ny tarika. Somary nandeha mafy ny fiara, ka izay no tombanana ho antony nahatonga ny loza. Nivarina tany an-kady ny fiara misy azy ireo. Valo no naratra. Ny iray tamin’izy ireo no noentina haingana any an-drenivohitra. Ny ambiny kosa no manaraka fitsaboana etsy amin’ny hopitaly Ankazobe », hoy ny avy ao amin’ny Zandarimarian’Ankazobe.
Voalaza fa tsy misy ahiana ny ain’ireo naratra. Efa nalefa nody ireo mpikambana hafa satria efa tsara ny toe-pahasalamany. Nofoanana kosa ny seho izay tokony hataon’ny tarika, omaly hariva, sy ny fandraisany anjara amin’ny « Lampogno » any Antsohihy.
Tarika malaza amin’ny mozika mampihetsika ny tarika D’Alvis. Isan’ny manakoako eny amin’ireo haino aman-jery ankehitriny ny hiran’izy ireo. Fanta-daza amin’izany ilay « Tô » sy ny hira « Alefa Barea » natokan’ity mpanakanto ity ho an’ ny Barean’i Madagasikara.
Fifandonana tamin’ny dahalo :: Zandary iray voatifitra teo amin’ny tarehiny